Ogeessaa suuraa: Mormii Oromoo suuraan galmeessee ol kaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Ogeessaa suuraa: Mormii Oromoo suuraan galmeessee ol kaa'e
Madda suuraa, YERO ADUGNA
'Yeroon maqaa kooti'
''Yeroon kuni yeroo kooti, haalli amma tahaa jiru kunis yerooma keenya keessa tahaa jira gatii taheef, dabaltaan maqaan koos Yeroo waan taheef'' agarsiisa suuraa wiirtuu aartii Guraamaayilee jedhamutti dhiyyeese ''Yeroo keenya'' jedheen moggaase jedha.
Yeroo Addunyaa Itichaan maqaasaati suuraa kaasuun immoo ogummaasaa. Mormiifi diddaa uummataa Oromiyaa keessa gaggeefamaa ture suuraan galmeessee ol kaa'aa jira.
''Ijoolleen yeroos gadi ba'anii kan mormaa turan jaalatanii mitii karaa biraa waan hin qabneefi, biyyattii keesstti immoo namani firri isaa jalaa hin hidhanme hin jiru''
Yeroosaatti kana galmeessuun baayyee sodaachisaa yoo taheyyuu seenaa keenyi garuu ol kaa'amuu qaba jedhee waanin amananuuf suuraawwan kunneen kaasaa ture. jedha Yeroon.
'Yeroon suuraa kaasuu jalqabe Tulluu Geedoon deeme'
Qaabatoo 'Tulluu Geedoo'
''Yeroon footoo kaasuu jalqabe biyya akkoo koo naannoo 'Geedoo' lafa 'Tulluu Gedoo' jedhamu dhaqeen ji'a afuuriif taa'ee.
Baadiyyaa ji'a afur taa'een jireenya achii akka daawwitii taheen agarsiisuu fedhe isa immoo waanuman beekurraa jalqabe.
Isan waaree kaasaa oolu waarii akkoo kootti agarsiisan ture. Akkoon koo yeroo suuraashee argitu ''akkas dulloomeeraa edaa'', ''dhaqni koo akkas ta'eeraa'' naan jettee.
Dubbiin akkoo koo nama waggaa 76 taatee dulloomeeraa jettee na gaafachuun qabxii guddaa ka'umsa hojii koo tahe Jechuun Yeroon yaadannoosaa ibsata.
'Mormii yeroosii namoonni hin amanne jiru ture.'
Inumaayyuu ''Namoonni hin amanne jiru. Dhugaadha moo kuni namoonni jedhan jiru'' kanaafin mormii sana galmeessuun namni waan biyyisaa keessa dabrite akka daawwitii of keessatti haa ilaaluuf jedheen ol kaa 'aa ture jedheera Yeroon
Yeroon ''Namni hin amanne suura gaafa ilaalu ni amana kunimmoo anaaf waa guddaadha '' jedha. ''oduun ni baddii'' suuraan waan qabatamaa gatii taheef waggaa digdama booda yoo argitellee ni amanta jedha.
'Jarmanitti namoonni yoo dulloman kan isaan gargaaru hin jiru.'
Yeroon hojii isaa magaalaalee Jarman Barliin, Firaankfarti, Biraandanbuurg fi kan biroottillee hojiiwwan isaa do'ii akka dhiyeesse hima.
''Dhimma na gammachiisuu tokko yeroo dheeraa hanga waggaa lamaa tahu fudhachuun nan galmeessaa bifa aartiitiin nan seenessa'' kan jedhu Yeroon
Suurawwan uumamaa 'National Geographic'
Kanamalees, 'biyya Jarman an jiraadhu keessatti namoota raagan waliin wayitan hojjedhu haala jiruufi jireenyaa isaan dabarsan kan biyya keenyaan wal hin fakkaatu, yoo dulloomte namni nama hin gaafatu.'' dhimma kanas leensii kaameeraa isaatiin hambifatee namootatti agarsiifateera.
Jireenya baadiyyaa maatiisaa 'Tulluu Geedoo' illee korojoo suuraasaa keessa kaawwachuu ni dubbata.
Viidiyoo, Biyya kanatti wanti salphaadha jedhee yaadu, baqataa jedhamee waamamuu qofa.
Tigraay keessatti haleellaan saalaa raawwatamu isa yaachisuu UN beeksise
Baayidan loltoota bakka paarkingii rafaniif dhiifama gaafatan
Lola hidhattootaa fi mootummaa 'lammilee nagaa gatii qaalii kafalchiisaa jiru'
Himatawwan jaha Jawaarfaa irratti banaman akka adda citan murtaa'e
Google dhuguma gabaa Awustiraaliyaa dhiisuu danda'aa?
Raashiyaatti hiriira mormii deeggartootni Navaalnii bahanirratti hedduun hidhaman
Jeedalli diimtuu Gaarreen Baalee maalirra jiru?
Dureen olaanaa Iraan Tiraamp wayita golfii taphatutti haleella jechuun sodaachisan